Submitted by tunkhine on Fri, 09/25/2009 - 11:57
5 Golden Power B1
6 Royal ThanLwin B2
7 KMD C1
8 Alliance Star C2
9 MMG C3
10 Thazin Myint Mo C4
11 Access Spectrum D1
12 Info Gate D2
13 Technoland D3
14 Red link D4
15 Linn Htet Saung D5
16 Lenovo D6
17 Thein Minn D7
18 Blu Ray D8
19 Asia Tech E1
20 Forever Group E2
21 Micro Computer E3
22 MNT E4
23 PIT F1
24 MRS F2
25 Royal Ayerwaddy F3
26 Myanmar Inspiration F4
27 Perfect F5
28 Notebook Mart F6
29 VCT Group F7
30 DCD F8
31 First Mark F9
32 Koala F10
33 Marvel Tech F11
34 King Power F12
35 Myanmar .Net F13
36 Integra F14
37 Cyber Net F15
38 Era Technolory F16
39 MBC Software F17
40 iCom Computer F18
41 Advanced Vision F19
42 Trust Net F20
43 Assembler F21
44 MUC F22
45 Mobile Friend F23
46 Cystem F24
47 Cyber Zone F25
48 KyawZeyar F26
49 Cyber City F27
50 Innwa F28
51 Creative Web Studio F29
52 King Service Wisdom F30
53 Technomation Studio F31
54 PC World F32
55 Winner Computer F33
56 LEO F34
57 CTT Computer F35
58 e-Trade Myanmar F36
59 Myanmar Golden Rock F37
60 SM3 Myanamr Software(R&S Software) F38
61 Lu Lay General Trading F39
62 Concordia J1
63 RIT J2
64 Youth Computer J3
65 T-land J4
66 MIT J5
67 Simpson S1
68 ICE S2
69 Thein Han & Khaing Myae S3
Read more about Exhibitors of ICT Exhibition Oct-2009
Submitted by tunkhine on Mon, 09/21/2009 - 13:44
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှ ကြီးမှူးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း (MCIA) တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပမည့် Myanmar ICT Exhibition Oct-2009 ကို ၂ဝဝ၉ ခုနစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ မှ ၁၈ ရက် နေ့ အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်လျှက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိုင်တီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အိုင်တီကဏ္ဍကို အထူးစိတ်ဝင်စားသော ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မန်နေဂျာများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ၊ လူငယ်များနှင့် ပြည်သူ လူထုတို့အား ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာဆက်စပ် အပိုပစ္စည်းများ၊ နောက်ဆုံးပေါ် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများ နှင့် ကွန်ပျူတာအသုံးချ ဆောဖ့်ဝဲ နည်းပညာများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ Myanmar ICT Exhibition Oct-2009 ကို စီစဉ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြပွဲတွင် ပါဝင်ပြသမည့် ကုမ္ပဏီများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
မြန်မာ့သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းပညာပြပွဲကို ၂ဝဝ၉ခုနှစ်၊atmufwdkbmv ၁၅ ရက်မှ ၁၈ ရက် အထိ ( ၄ )ရက် တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ နေ့စဉ် နံနက် ၉နာရီ မှ ညနေ ၅နာရီအထိ ICT ကုမ္ပဏီများ၊ အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီများ၊ သင်တန်းကျောင်းများ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ပြသကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၂. ၉. ၂၀၀၉ ညနေ ၄နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စရံငွေပေးသွင်းခြင်းကို ပြုလုပ်ရပါမည်။
၂၄.၉.၂၀၀၉ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ပြခန်းများကို လေလံစနစ်၊မဲနှိုက်စနစ်များဖြင့် နေရာချထား ငှားရမ်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၄.၁၀.၂၀၀၉ ရက်(ဖွင့်ပွဲနေ့မတိုင်ခင်ည) ညပိုင်းတွင် ပြခန်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသော တာဝန်ရှိသူများသာ ညအိပ်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ညအိပ်စောင့်မည့်သူများကို ပူးတွဲပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ရန်)
၁၅.၁၀.၂၀၀၉ ရက် ပြပွဲဖွင့်ပွဲသို့ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဧည့်သည်တော်များမှ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ် ပေးမည် ဖြစ်ပါ သဖြင့် အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ လှည့်လည်ကြည့်ရှုချိန်တွင် ရှင်းလင်းပြသမည့် ပြခန်းတာဝန်ခံများက ထိုနေ့တွင် မိမိတို့ ပြခန်းများထံသို့ နံနက် ၇နာရီ အရောက် နေရာယူပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပြခန်းတွင်းသို့ နံနက် ၆း၃၀နာရီတွင် စတင် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပါမည်။ လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်အရ အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေစဉ် အတွင်း လုံခြုံရေးကဒ်ပြားချိတ်ဆွဲထားသူများသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သဖြင့် ရှင်းလင်းပြသရေး အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဆိုင်ခန်းရှင်များ၊ မန်နေဂျာများ၊ သရုပ်ပြရှင်းလင်းမည့်သူများ၊ ကိုယ်ဟန်ပြမောင်/မယ်များကိုပါ စာရင်းပေးသွင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၆.၁၀.၂၀၀၉ မှ ၁၈.၁၀.၂၀၀၉ ရက်များတွင် ခန်းမကြီးဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီမှ တာဝန်ခံတစ်ယောက်စီ နံနက် ၈း၁၅နာရီ အရောက် လာရောက်ရပါမည်။ နံနက် ၈:၃ဝနာရီမှ ၈း၄၅နာရီအတွင်း ပြပွဲ ကျင်းပရေး တာဝန်ရှိသူများမှ ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံများနှင့်အတူ ပြခန်းများကို ဖွင့်လှစ် စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်အတွင်း ပြပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီမှ ထုတ်ပေးထားသည့် လုံခြုံရေးကဒ်ပြား ချိတ်ဆွဲထားသည့် ဆိုင်ခန်းရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများသာ ဝင်ရောက်ခွင့် ရှိပါသည်၊ လုံခြုံရေး ကဒ်ပြားမပါသူ မည်သူမဆို ဝင်ခွင့် မရှိပါ၊ မည်သူမျှ အပြင်သို့ ပြန်လည် ထွက်ခွင့်မရှိပါ၊ ပစ္စည်းများ ပြန်လည်ထုတ်ခွင့် မရှိပါ၊ လုံခြုံရေး ကဒ်ပြားများ အပြင်သို့ ပြန်လည် ထုတ်ခွင့် မရှိပါ။ မိမိတို့ ပြခန်းများကို စစ်ဆေးပြီး ပြဿနာ တစုံတရာ ရှိခဲ့ပါက ပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီသို့ ထိုအချိန်အတွင်း ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရပါမည်။
နေ့စဉ် နံနက် ၉နာရီတွင် အများပြည်သူများ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပြခန်းကို ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နေ့စဉ် ညနေ ၅နာရီတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် တာဝန်ခံတစ်ဦးနေခဲ့၍ ကျန်ဝန်ထမ်းများ ပြခန်းမှ ထွက်ခွာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ညနေ ၅:၃ဝနာရီတွင် ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံများအားလုံး တစ်ပြိုင်နက်ထွက်ခွာ၍ ပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ ခန်းမအား ချိတ်ပိတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၉.၁၀.၂၀၀၉ ရက်ည ၈:၀၀ နာရီအပြီး မိမိတို့၏ ပြခန်းများကို အမြန်ဆုံးဖျက်သိမ်းပေးရပါမည်။
ပြခန်းများ၊ ကော်ဇောများ၊ လျှပ်စစ်မီးနှင့် ပရိဘောဂများ ပျက်စီးလျှင် ပါဝင်ပြသသည့် ကုမ္ပဏီမှ တန်ဖိုးအတိုင်း ပေးလျော်ရမည်။ ပြခန်းနံရံများကို သံရိုက်ခြင်း၊ Nail Gun ပစ်ခြင်း၊ ချိုးဖဲ့ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အခြားပျက်စီးစေနိုင်သော အပြုအမူများ မပြုလုပ်ရပါ။
မိမိတို့ ကုမ္ပဏီအရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များသည် အခြားကုမ္ပဏီများ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရန် ပြပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းခွင့်ပြုချက်ယူ၍ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။
မိမိတို့ အသံချဲ့စက်များကို အခြားပြခန်းများ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လောက်သည့်အထိ ကျယ်လောင်စွာ မဖွင့်ရပါ။
အရောင်းပစ္စည်းများနှင့် ပြခန်းအလှအပ ခင်းကျင်းခြင်းနှင့် ကြော်ငြာချိတ်ဆွဲခြင်းများကို မိမိပြခန်းအတွင်းမှ လွဲ၍ ခန်းမ၏ နံရံများ၊ တိုင်များနှင့် လူသွားလမ်းများတွင် ပိတ်၍ မခင်းကျင်းရပါ။
လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်အရ ပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ အခါအားလျော်စွာ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။အထက်ဖေါ်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များမှတစုံတရာ ဖေါက်ဖျက်ခဲ့ပါကအသင်းများမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့်ပြပွဲများတွင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ၀င်ရောက်ပြသခွင့်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
ပြခန်းငှားရမ်းရာတွင် သိသင့်သည့် အချက်အလက်များနှင့်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(၁) ပြခန်းများအား အမျိုးအစား (A) မှ (J) အထိသတ်မှတ်ထားပါသည်
(၂) ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ အခန်းအရေအတွက်အား ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။ အမျိုးအစား (A) မှ (J) အထိပြခန်းများအား တစ်ခန်းလျှင် FEC-100 နှုန်းထားဖြင့် မိမိလျှောက်ထားလိုသည့် အခန်းအရေအတွက် အလိုက် ကြိုတင်စရံငွေ ပေးချေရပါမည်။ လိုအပ်သော အခန်းအရေအတွက်မရပါက ကြိုတင်စရံငွေပေးမှု အထဲမှ ပိုငွေအား ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) က။ A1,A2,A3,A4 မှလွဲ၍ပြခန်းများအား မဲနှိုက်စနစ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း (MCIA) အသင်းဝင် ကုမ္ပဏီများ အား ဦးစားပေး မဲနှိုက်သွားပါမည်။ အခန်းလုံလောက်စွာရှိပါက ကုမ္ပဏီများ အဆိုပြုထားသော အခန်း အရေအတွက် အတိုင်း ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။ အခန်းများကျန်ရှိပါက အသင်းဝင်မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီများကို ငှားရမ်းပေးပါမည်။
ခ။ ကုမ္ပဏီများအနေနှင် ပြခန်းများအား (A)မှ (F)အထိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာလျှောက်ထားနိုင်သော်လည်း ပြခန်းမလုံလောက်ပါက ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် ပြခန်း( ၁ )ခန်းသာငှားရမ်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၄) ပြခန်း ကြိုတင်ငွေနှုန်းထားများနှင့် ငွေပေးသွင်းရမည့်ရက်များကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည်။
F1 to F39
(၅) ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒုတိယအရစ်ငွေပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ပြပွဲ ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ကြိုတင်ပေးအပ်ထားသော စရံငွေအား ပြန်လည်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပဲ အဆိုပါ အခန်းအားလည်း အခန်းလိုအပ်သော အခြားကုမ္ပဏီများကို ထပ်မံငှားရမ်းပါမည်။
(၆) မဲမပေါက်၍ ငှားရမ်းခွင့်မရရှိသော ကုမ္ပဏီများအား ကြိုတင်ငွေပြန်ပေးပါမည်။ ငှားရမ်းခွင့်ရရှိပြီးသွားသော ကုမ္ပဏီများအား ကြိုတင်ငွေ ပြန်လည်ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပါ။
(၇) လျှောက်ထားသည့် အရေအတွက်သည် ရှိသောအရေအတွက်ထက် များပြားနေပါက မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခွဲဝေ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Read more about Myanmar ICT Exhibition, Oct-2009
Submitted by tunkhine on Sat, 08/29/2009 - 18:18
Network Associate စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုသူစုစုပေါင်း၏ 24% အောင်မြင်ပါသည်။
ရန်ကုန် မန္တလေး တောင်ကြီး
၀င်ရောက်ဖြေဆိုသူ 135 8 7
အောင်မြင်သူ 35 1 0
Fundamental Software Engineering စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုသူစုစုပေါင်း၏ 13% အောင်မြင်ပါသည်။
၀င်ရောက်ဖြေဆိုသူ 104 4
အောင်မြင်သူ 13 1
Result List (23rd August, 2009)
Sr.No Roll. No Name Grade
1 NA-028 Khin Hnin Pwint B
2 NA-123 Win Naing Myint B
3 NA-035 Kyaw Myo Aung @ Par Moo Kumar B
4 NA-036 Kyaw Myo Hlaing B
5 NA-121 Wai Wai Lin B
6 NA-039 Kyaw Thura B
7 NA-026 Khaing Lynn Soe B
8 NA-106 Thet Lwin B
9 NA-108 Thiha Bhone Myint Tun B
10 NA-091 Soe Pyae Oo B
11 NA-025 Kaung Zaw Tun B
12 NA-044 Lin Zar Phyo B
13 NA-059 Myo Min Soe C
14 NA-063 Naing Tun C
15 NA-064 Nanda Kyu C
16 NA-072 Phyo Pyait Aung Gyi C
17 NA-077 Pyae Sone C
18 NA-085 Saw Nyi Nyi Tun C
19 NA-114 Tin Maung Htwe C
20 NA-002 Aung Htun Lin C
21 NA-023 Kaung Zaw C
22 NA-041 Kyaw Zin Latt C
23 NA-067 Nay Lin Htun C
24 NA-074 Pyae Phyo Kyaw C
25 NA-082 Saw Eh Ta Taw C
26 NA-128 Ye Kyaw Soe C
27 NA-145 Zar Chi Hlaing C
28 NA-001 Arker Linn C
29 NA-005 Aung Kyaw Soe C
30 NA-073 Phyo Wai Aung C
31 NA-081 Saw David San C
32 NA-087 Shwe Sin Htun C
33 NA-094 Soe Thwin Oo C
34 NA-100 Thant Zin Oo C
35 NA-139 Zaw Zaw Htat C
Sr.No Roll No Name Grade
3 NA-00309 Aung Ko Ko Thet C
1 FSE - 001 Aung Aung Myo Thant A
2 FSE - 046 Min Htun Zaw B
3 FSE - 051 Naing Lin Thet B
4 FSE - 054 Nilar Aung @ Thuzar Win B
5 FSE - 030 Kyaw Ko Ko Thet B
6 FSE - 031 Kyaw Lwin Phyo B
7 FSE - 103 Yan Lin Aung B
8 FSE - 033 Kyaw Min Thu C
9 FSE - 007 Chan Thar Myint C
10 FSE - 042 May Myat Khine C
11 FSE - 070 Si Thu Hlaing C
12 FSE - 084 Thet Paing Wynn C
13 FSE - 053 Nay Myo Aung C
1 FSE-00409 Aung Zaw Tun B
Read more about MCPA Exam Result
Submitted by tunkhine on Sun, 08/23/2009 - 11:09
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း MCPA မှ Fundamental Software Engineering Exam နှင့် Network Associate Exam တို့ကို Myanmar InfoTech ၏ Function Hall တွင် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၂နာရီ အထိ ပြုလုပ်ကျင်းပပါသည်။ Fundamental Software Engineering exam ကို ၁၀၄ ဦး နှင့် Network Associate exam ကို ၁၃၅ ဦး ၀င်ရောက်ဖြေဆိုကြပါသည်။
Read more about MCPA Exam @ 23 Aug 09
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း MCPA မှ Fundamental Software Engineering Exam နှင့် Network Associate Exam တို့ကို Myanmar InfoTech ၏ Function Hall တွင် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၂နာရီ အထိ ပြုလုပ်ကျင်းပပါသည်။ Fundamental Software Engineering exam ကို ၁၀၅ ဦး နှင့် Network Associate exam ကို ၁၃၆ ဦး ၀င်ရောက်ဖြေဆိုကြပါသည်။
Submitted by tunkhine on Thu, 08/20/2009 - 13:46
Please Download detail program schedule at the following link -
(1) Participants should be nationals of Malaysia, Mongolia, Myanmar, the Philippines, Thailand and Vietnam.
(2) Participants should have passed FE or SW Examination, or have participated in past AOTS IT training programs such as the training program on “Instructors of FE (FEIT)”, “Fundamental Information Technology Engineers (FE)”, “Software Design & Development Engineers (SW)”, etc., or be instructors in charge of education or human resource development in the IT field.
(3) Participants should have at least5years’ experience in the field of IT.
(4) Participants should be between 23-50 years of age on the starting day of this program.
(5) Participants should be university graduates or have equivalent professional experience.
(6) Participants should haveasufficient working knowledge of spoken and written English.
(7) Participants should be physically and mentally fit to undergo an intensive training program in Japan.
(8) Participants’ companies should not have capital from companies of developed countries, including Japanese ones.
(9) Participants should not be students or armed forces personnel.
(10) AOTS ex-participants who have recently been awarded on AOTS Scholarship and participated in an AOTS training program in Japan are not entitled to apply for any program which starts within six months (183 days) are not entitled to apply for this program.
(11) Participants should be nominated by designated local counterparts in their countries.
(12) Participants should be Members of MCPA.
Read more about AOTS Scholarship
Submitted by tunkhine on Mon, 08/17/2009 - 11:23
Place : Conferece Hall, ၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Speaker : ဦးမောင်မောင်သန့် (Director, Intellectual Developers Co., Ltd.)
ဦးဇော်မိုးသန့် (Director, Ace Data System)
T Professional များအနေဖြင့် IT Technology များအပြင် Business Environment နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိနားလည်ရန်၊ IT Market များကိုနားလည်ရန်၊ IT နှင့်ပတ်သက်သော Law & Regulation များကိုနားလည်ရန်၊ Process Standard နှင့် Technology Standard များကိုသိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ Software Engineer များ၊ IT Manager များ၊ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄) အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ သို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about Seminar @ Bridging the Gap Between IT and Business
Submitted by tunkhine on Fri, 08/14/2009 - 18:03
Read more about MCPA Exam @ 23 Aug 2009
Submitted by tunkhine on Mon, 08/10/2009 - 13:18
Speaker : ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း၊ ဦးရဲမြတ်သူ၊ ဦးညီလင်းဆက်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်း (MCPA)သည် ICT နည်းပညာများကို လိုက်စားကြသော မြန်မာလူငယ်များ အတွင်းတွင် သုသေသနပြုခြင်းနှင့် တီထွင် ဖန်တီးခြင်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်၊ အကျိုးရှိသော အသုံးဝင်သော ပြည်တွင်းဖြစ် ICT ဆိုင်ရာ tool များ product များ ပိုမိုပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက် အားပေးကူညီရန်၊ မြန်မာစာကို ICT နယ်ပယ်တွင် ပိုမို၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချလာနိုင်စေရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ခြောက်လကာလတာ Projec-based Contest တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရှိပါသည်။ Contest ၏အမည်မှာ MCPA Challenge ဖြစ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် အကြောင်းအရာသည် Myanmar Search Engine ဖြစ်ပါသည်။
ယခုပြုလုပ်မည့် Seminar တွင် MCPA Challenge အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက် Myanmar Search Engine နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းပညာဆိုင်ရာများကို အထက်ဖေါ်ပြပါ speaker များမှ ရှင်းလင်းဟောပြောကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA Challenge ကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်သူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄) အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about Seminar : Myanmar Search Engine
Submitted by tunkhine on Wed, 08/05/2009 - 11:33
MCPA Challenge နှင့်ပတ်သက်ပြီး
- မရှင်း၍ မေးမြန်းလိုသည်များ
- ထပ်မံ သိလိုသောအချက်များ
ကို MCPA မှ တာဝန်ရှိသူများထံသို့ တိုက်ရိုက် communicate လုပ်နိုင်ရန် MCPA Website ၏ Forum အောက်တွင် MCPA Challenge အမည်ဖြင့် ကဏ္ဍတစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။
MCPA Challenge နှင့်သက်ဆိုင်သည့် General အကြောင်းအရာများကို ဤ topic အောက်တွင် လာရောက်ဆွေးနွေးကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
MCPA Challenge ပြိုင်ပွဲဝင်သူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် Technical ဆိုင်ရာ topic များကိုလည်း ဤ ကဏ္ဍအောက်တွင် ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်ပေးပေးသွားပါဦးမည်။
Read more about Forum Topic for "MCPA Challenge"